Mazuva akafukidzwa newalnut neorenji - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Mazuva akafukidzwa newalnut uye orenji
Kudya16 maminitsi12 vanhu125 makarori
Aya mazuva akaiswa walnut neorenji ndeye sweet vegan zvakagadzirirwa Kisimusi kunyangwe zvichigona kuitwa chero nguva yegore.
Iyi resipi hapana cheiyo fusion ye2 yangu snacks yekisimusi favourites: mazuva ane toasted walnuts uye candied uye chokoreti-yakanyikwa maranjisi. Iwo ari maviri ekutanga andinoda ... asi kwete paKisimusi chete. 😉
Saka ndakavasanganisa kuita resipi imwe chete ichiita kuti ive chishuwo chine hunhu hwakanaka uye mamwe madiki nuances kushamisika chero chiitiko.
1 Mazuva akafukidzwa newalnut uye orenji
2 Unoda kuziva zvakawanda nezveaya maorenji uye walnut akaiswa misi?
Mazuva anonaka akanyikwa muchokoreti uye nekuzadza kwakakosha.
Kubika nguva: 6M
Nguva yakazara: 16M
100 g yeakakangwa walnuts (uye mamwe mashoma ekushongedza)
25 g ye orange marmalade (ona recipe)
12 yakatemwa misi
150 g yechokoreti
Tinoisa peeled walnuts mugirazi, tipwanye ivo Masekonzi mashanu, kumhanya 10.
Isu tinodzikisa zvidimbu kune mapanga uye kuwedzera jamu. Isu tinosanganisa panguva 10 masekondi, kumhanya 2 kusvika wawana paste.
Nekapu diki tinozadza misi yegomba uye tinoichengeta mufiriji patinenge tichinyungudutsa chokoti.
Mugirazi yakachena uye yakaoma tinoisa chokoreti uye tinoiisa panguva 10 masekondi, kumhanya 8. Tinoinyungudutsa panguva 5 maminetsi, 37º, kumhanya 1.
Tinovhara misi nechokoti yakanyunguduka uye tinowedzera chidimbu chewalnut kwavari apo chokoti ichiri kudziya.
Tinovasiya pane rack kana tireyi kusvikira chokoreti yakaoma.
Unoda kuziva zvakawanda nezveaya maorenji uye walnut akaiswa misi?
Chokwadi ndechekuti mazuvano akanyikwa muchokoreti mufaro chaiwo nekuti ndiwo nyore uye akapfuma zvikuru.
Iwe unongofanira kusanganisa zvigadzirwa, zvizadze uye uzvipfekedze muchokoti. Saka mumaminitsi munenge mavagadzirira Zvekuravira.
Dzinoshandawo zvikuru nokuti dzinogona kudaro ita pamberi. Saka unogona kuronga zviri nani uye uchave nenguva yakakwana yezvese mabikirwo.
Se gara zvakanaka mufiriji chero vari mumudziyo usingapindi mhepo. Mumba mangu haatore more than 1 week asi anozogara nguva refu.
Iwe unotoziva kuti, kana uchinyungudutsa chokoreti, unogona kuzviita neThermomix®, mune bain-marie uye zvakare microwave. Iyi nzira inokurumidza asi yeuka kuti unofanirwa kushandisa nguva pfupi yemasekonzi gumi nemashanu kuti usatsva.
For the decorIwe unogona kushandisa zvidimbu zvewalnut kana candied orenji. Asi iva nechokwadi che "kuvanamatira" apo chokoreti ichidziya nokuti kana uchingotonhora haugone.
Uye kurudziro yekupedzisira: Kana uine vegan vaenziIta shuwa kuti chokoreti yacho yakavakodzera uye kuti haina zvisaririra zvezai kuitira kuti vanakidzwe nemazuva aya 100%.
Mamwe mashoko - Kisimusi menyu yakagadzirwa pamberi / Orange marmalade
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Navidad, Desserts, Vegan
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Navidad » Mazuva akafukidzwa newalnut uye orenji
Cheese roll nebhekoni uye nzungu